के तपाई कसैको नासो बोकेर विदेश यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ?
चिन्तामणि पौडेल, कतार
हामी नेपाली विभिन्न अवसर खोज्दै धेरै देशहरूमा पुगेका छौं । जुनसुकै देशमा जस्तोसुकै अवसर प्राप्त गरेपनि आफ्नो देशको मायाबाट अलग रहन सक्दैनौं । आफू पुगेको देशको नागरिकता नै मिलेर सपरिवार उहीँ बस्दै आउदा पनि बेला–बेलामा नेपालको मायाले तानिरहने हुनाले नेपाल आउने जाने गरि रहन्छौ भने पिआर नपाउनेहरु वा त्यस्ता देशमा हुनेहरू समय–समयमा आउनेजाने गर्ने नै भयौं ।
हामी नेपाली जहाँ रहेपनी आफ्नो संस्कार तथा आफू खाइ हुर्केको नेपाली खानाका परिकारको स्वादलाई कहिल्यै भुल्न सक्दैनौं । त्यसैले त आफू नेपाल आउदा होस् वा कोहि आउने साथीहरू पाएसम्म घरपरिवारलाई भनेर भए पनि नेपाली परिकार लिएर आउन र पठाउन आग्रह गरिहाल्छौ । सोही अनुसार परिवारले पनि पठाइ दिने गर्छन् । यस्तोबेला मित्रताको हिसाबले नासो लगिदिनु पनि पर्छ । तर, आजभोलि कसैको नासो लगिदिन पनि एकपटक राम्रोसँग सोच्नुपर्ने भएको छ । त्यहि नासोले व्यक्तिको जीवन मरभूमिमा पासोमा पारिदिएको कयौ घटना बाहिर आएका छन् । नासो पठाउने वा मगाउने साथीहरूले सरल रूपमा लान मिल्ने खालका सामानहरु पठाउनु भए ठिकै हो, हैन भने सहयोग गर्छु भन्दा आफै ठूलो समस्यामा पर्न सकिन्छ ।
देश अनुसार कुनै देशमा वैधानिक पाएको सामान तथा औषधि अर्को देशमा अवैधानिक ( निषेधित ) हुनसक्छन् । यस बारे सबैलाई कानुनी जानकारी हुदैन । जानकारबिहीन तथा अरुको कुरामा सोझै बिश्वास गर्ने सिधा खालका मान्छेहरु सजिलै यसैको सिकार बन्न पुग्छन् । बर्षौ देखिको बिदेशी यात्रा तथा विभिन्न समाचार माध्यमबाट यस्ता खबरहरु सुन्नमा आइरहन्छन् तर पनि नेपालीहरु यस्ता मुद्दाहरूको कारण समस्यामा परिरहेका छन कारण अरुलाइ निसंदेह बिश्वास गर्नु ।
मैले पनि त्यस्तै एउटा अनुभव गरेको छु । त्यो अनुभवको एउटा पाठ यहाँहरु सामु सुनाउन चाहन्छु । पोहोर साल म कतार आउदै गर्दा काठमाडौ एयरपोर्टमा लगेज गर्दै बोर्डिङ पास लिदै थिए मेरो समानको तौल एयरलाइन्सले दिएको अनुमति भन्दा कम थियो भने कतार नै आउने अर्को मेरो पछाडि लाइनमा हुने अपरिचित भाइको सामान धेरै भयो । यदि उसले त्यो सामान लैजान चाहेमा बढी भएको सामानको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हुँदा उनले मसँग अनुरोध गरे, ‘कतारमा गएर म लिन्छु हजुरले मेरो अलिकति सामान हजुरको लगेजमा हालिदिनु पर्यो’ उनले सहयोग मागि हाले । म राजी पनि भए र उनको सामान मेरो लगेजमा राख्न लागे । हामीले त्यसो गरेको एयरलाइन्सको काउन्टरमा बस्ने स्टाफले हेरिरहेका थिए ।
सोही क्रममा उनले मलाई सोधे ‘यो हजुरले अहिले लगेजमा थप्नु भएको पोकोमा के समान छ थाहा छ ?’ मैले, ‘खोइ थाहा भएन’ भने । पुन ः उनले सोधे, यो ‘सामान दिने भाइलाई चिन्नु हुन्छ ?’ मैले जवाफ दिए, ‘चिन्दिन, एउटा नेपाली दाजुभाइको नाताले सहयोग गरौं भनेर हो ।’ म यति मात्र बोलेको थिए उनले भने ‘यो सामान लिकाल्नुहोस् नलैजानु होस् रिसाए रिसाउछन यो पोका भित्र कुनै कतारमा निषेधित सामान रहेछ भने हजुरको लगेजभित्र भएको हुँदा हजुर नै समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ ।’ उनले यति भनेपछि मलाई पनि ठिक भने भन्ने लागेर त्यो भाइलाई माफ गर्नुहोला सामान भन्दै निकालेर फिर्ता गरि म आफ्नो यात्रा तिर लागेको थिए ।
यस पटकको यात्रामा पनि नेपालबाट यात्रा गर्दा साथीहरूले सानो नासो लगिदिन र ल्याइदिन आग्रह गर्नुभयो । हुन्छ त भने । तर, धन्न समस्यामा पर्नबाट जोगिन पुगे । किन कि, मलाई पोहोर साल काठमाडौ एयरपोर्टमा एयरलाइन्सका एक कर्मचारीले सम्झाएको कुरा याद आइहाल्यो । अनि मलाई दिएका सामानका पोकोहरु राम्रोसँग चेक गरेरमात्र लान्छु भन्ने निधो गरे । सामानहरु चेक गर्न थाले । समान चेक गर्ने क्रममा पोकाहरुभित्र औषधिहरु फेला परे । मलाई औषधि सम्बन्धि जानकारी नभएकोले औषधि सम्बन्धि ज्ञान् भएका मेरा साथी चुडामणी अधिकारीज्युलाई देखाउँदा बल्ल म झसङ्ग हुन पुगे ।
पोकाहरुमा कोहीले पिठो छ भन्नू भएको थियो पिठो भित्र निषेधित औषधि पनि रहेछ । कोहीले जिन्सपेन्ट भन्नुभएको थियो गोजीमा निषेधित औषधि । कोहीले जुत्ता हो भन्नुभयो, जुत्ता भित्र निषेधित औषधि । कोहीले ग्यास्टिकको औषधि भन्नु भएको थियो तर त्यही औषधि भित्र निषेधित औषधि फेला परे । मैले यस्ता घटना बारे थाहा पाएको हुँदा नासो चेक गरेर त्यस्ता औषधि लान नमिल्ने भनी सम्पर्कमा आउनेलाई फिर्ता गरिदिए भने, सम्पर्कमा नआउनेको फाली दिए । ४ जनाको नासोभित्र महिलाले प्रयोग गर्ने निषेधित औषधि पनि थिए ।
यदि मैले चेकजाँच नगरीकन सिधै यस्ता औषधि वा सामानहरु लिएर आइ पक्राउ परि परदेशमै सजाय भोग्नुपरेको भए मेरो जिन्दगी मेरो परिवारको स्थिति के हुनेथियो होला सोच्नु त एकपटक ? यदि यस्तो हुन गएको भए ती समाना पठाउनेहरु सहयोग गर्न त परै जाओस् आफ्नो नाम आउछ कि भनेर गुपचुप बस्ने बाहेक अरु केही गर्ने थिएनन् ।
म एउटा पात्र मात्र हु, आजभोलि नासो पठाउदा बाहिर भागमा देखिने गरि चिउरा चाउचाउ पिठो कपडा भए पनि भित्री भागमा निषेधित औषधि तथा गुट्का पानपराग पिठो जस्तो बनाएर रक्सी बनाउने मर्चाको धुलो आदि निषेधित समानहरु पठाउने गरेको भेटिएको पाइन्छ । यस्ता समानका कारण सम्बन्धित देशहरूमा पुग्दा पक्राउ परि कति नेपालीहरु आफूले गरेको बिश्वासको सजाय भोगिरहेका छन ।
नेपालबाट अरु देशमा जाँदा होस् वा नेपाल फर्कदाको यात्रामा होस्, कसैले हजुरलाइ नासो (पार्सल) पठाउछ भने राम्रोसँग चेकजाँच गरेर आफू जादै गरेको देशमा त्यस्ता किसिमका सामानहरु लान मिल्छ मिल्दैन राम्रोसँग बुझेर मात्र ल्याउने र लैजाने गर्नुहोला । अन्यथा, कसैलाई सहयोग गर्छु भन्दा हजुर आफै ठूलो समस्यामा पर्नसक्नु हुनेछ । बिदेश यात्रा गर्दा मात्र हैन आजभोलि देशभित्रै यात्रा गर्दा पनि यात्रको क्रममा भेटिने अपरिचित ब्यक्तिबाट सावधान रहनुपर्छ । किन कि, यात्राको क्रममा निकै नजिकको बन्दै स्नेह प्रकट गरेको नाटक गरेर विभिन्न बस्तुमा नसालु पदार्थ मिलाइ खान दिएर बेहोस तथा नसामा लठ्याइ लुटिएका पनि धेरै घटनाहरु बाहिर आएका छन् ।
लेखक पौडेल, पर्वत सेवा समाज कतारका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका प्रमुख सल्लाहकार हुन् ।